Ubisi - omunye imikhiqizo lokuqala ezisebenzisa izingane, obuhambisana naleyo umuntu kukho konke ukuphila. ubisi olufudumele kusukela ebuntwaneni kusiza ukulala, kushisa - kulula ukudlulisa abandayo. Ngokuhamba kwesikhathi, ekudleni avele nemikhiqizo yobisi: ukhilimu omuncu, ushizi, iyogathi, cottage shizi, iyogathi ... Zonke mikhiqizo zinezikhathi ukunambitheka emnandi futhi eziningi izici ewusizo. Ububi kuphela imikhiqizo yobisi - abayikho ikhalori high, high-fat yokudla kubangelwa. umkhakha Modern kunganciphisa izinombolo zabo ngokudala ubisi olunamafutha amancane, ushizi yogurt.
Ukuqhubeka ingxoxo mayelana inzuzo ongaletha ubisi, kufanele ishiwo mkhuba ubisi Ukudla isisindo ukulahleka. Nokho, ibuye asetshenziselwa ukwelapha izifo emathunjini. Nokho, lokhu kuyinto nesihloko kwenye ingxoxo.
Ubisi Ukudla isisindo ukulahleka, kukhona ezahlukeneyo eziningana ubulukhuni ezahlukene. Noma kunjalo, konke kwabo kukhona Izimo. Iqiniso lokuthi abanye abantu, umzimba akakwazi ukugaya i-lactose, laba bantu ukuhlala Ukudla ubisi ayinakwenzeka. Asincomi nalabo nje kunzima ukubekezelela ubisi. Ezinye izindaba zika-Ukudla ubisi for kwesisindo esihle.
Ngesandla Esiqinile mono-Ukudla esekelwe ubisi yakhelwe izinsuku 5. Kulawa, owokuqala 3 izinsuku esetshenziswa ubisi kuphela, ababili busuka Ukudla imifino. Ngenxa yalesi Ukudla kufanelekile kuphela zemvelo ubisi cow sika, ngakho-ke Kunconywa ukuba bawathenge edolobhaneni, noma, uma idolobha lakho luqhutshwa - kampompi emgqonyeni. Ngokwemvelo, lokhu kusho ubisi ngaphambi awaphuze ngempela kumele kubiliswe.
Ngosuku lokuqala 200 ml ubisi ukuphuza hhayi ngaphansi kuka-2 amahora, kwesibili - ikhefu kuyehla kube 1.5 amahora eyesithathu - ihora. izinsuku ezingaphezu ababili kudingeka ukulungiselela umzimba ukubuyela ukudla okuqinile. Ngaphambi kwasemini, kumelwe baphuze ubisi kuphela, futhi kusihlwa nawe ungadla zemifino isaladi ukukhanya. Ivunyelwe ukuba baphuze amanzi.
Kukhona eyodwa iqhinga lokuthi kukusiza ukuba ngokushesha ukuthola umqondo ukugcwala, kodwa futhi lula kakhulu ukumuncwa ubisi umzimba: kubalulekile ukuba donsa straw, e sips amancane. Ngokweyame zonke izincomo, ukudla okunjalo kuzovumela ukulahlekelwa 3-4 kg. Ubisi Ukudla ngempumelelo yokulwa esiswini, kunalokho amafutha kuwo, kungenxa yokuthi lokhu it is ngakho baziswa.
Kodwa ungakhohlwa ukuthi ukudla okunjalo - it is a esishaqisayo sina emzimbeni, ngakho kwasekuqaleni, kuyoba esikhathini Ukudla azithathe ngiwunqume ezemidlalo, futhi ngokuvamile sinciphise umthwalo ngokomzimba, futhi okwesibili, ukuphinda kumele kube kungekho izikhathi ezingaphezu kwesisodwa ngenyanga. Futhi lokho kumane nje kwenzeka ukuthi le nkathi asisebenzi nezinye ukudla.
Izithelo ubisi Ukudla - kungcono okunye okuhle kuya mono-ekudleni. It uhlanganisa inkathi esukela 3 kuya 7 izinsuku. Ngokuqinisekile lula kakhulu ukuhambisa, ngoba kokubili caloric lokhu Ukudla kuyinto imikhiqizo ephakeme kanye wehlukile. Ngoba izithelo ezifanele omuncu hhayi kuphela: apula, ubhanana, amagonandoda, amapetshisi nokunye okunjalo. Ngaphezu kwalokho, isilinganiso esincane nje ukusetshenziswa kuvunyelwe uju kanye namagilebhisi omisiwe.
Imenyu lokhu Ukudla libukeka kanje: The ibhulakufesi wokuqala siqukethe 120 g of ephansi fat yogurt, i-nezithelo itiye noma ikhofi. I tiye ukungezwa 20 g we uju nobisi. Ngakho, lapho isidlo yesibili - 100 g amanzi nganoma yisiphi iphalishi, sasidla incumbe ovunyelwe Bilisa ubisi ngalo. Ngaphezu kwalokho, 125 g ushizi 200 ml yobisi. Isidlo sasemini: izithelo isaladi, begqoke nge ephansi fat yogurt noma yogurt, amaqanda abilisiwe. Esikhundleni ulethisi edliwayo amaqanda 100 g izaqheqhe. Dinner isiphuzo in yogurt noma elibilile ubisi kubhakwa. Eyodla wokuba angadli isithelo, 125 amagremu yogurt ingilazi yobisi.
Phakathi nezinsuku ezingu-7 dety enjalo kungaba phinda mayelana 7 kg. Nokho, kanye ngenyanga ukuphinda lokhu kucwaninga ngomzimba wakhe bengayi. Kungenjalo-ke kuyodingeka imiphumela yempilo ezingezinhle. Ubisi Ukudla isisindo ukulahleka siyasebenza kakhulu, kodwa kumele zisetshenziswe, njenganoma iyiphi enye, ngokuqapha.
Ukudla umzimba omiswe for amadoda. amathiphu
Directory abangenayo: Amakolishi Krasnoyarsk
Lokusungula Wezingane: Appliqué Easter
Nethempeli Big Buddha of Phuket: umlando indalo, izici kanye nokubuyekeza
Amahhotela: "Caravanserai". I-Caravanserai, Turkey